चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउलान्? - China Radio International
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउलान्?
(GMT+08:00) 2015-01-06 09:09:10
कुनै पनि विदेशी नेताको भ्रमण मापन गर्ने निश्चित कूटनीतिक सूचकहरू हुन्छन्। गत पुस 10 देखि 12 गतेसम्म भएको चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण यस दृष्टिबाट हेर्दा निकै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। नेपाललाई प्राप्त हुँदै आएको चिनियाँ सहयोगमा चार गुणा वृद्धि, सशस्त्र प्रहरीबल प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको शिलान्यास, नेपालका नौ प्राथमिकता क्षेत्र छुट्याएर चीनको सहयोग घोषणा, संविधान निर्माणमा चासो र सद्भाव प्रकटजस्ता सूचकहरूले उक्त भ्रमण सफल रहेको देखिन्छ।
धेरै चिनियाँ सहयोग प्राप्त गर्ने देशमा उत्तर कोरिया पहिलो हो भने नेपाल दोस्रो। अब चीनले नेपाललाई प्रत्येक वर्ष 80 करोड चिनियाँ युआन अर्थात् करिब 13 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिनेछ। उक्त सहयोगका लागि चीनले प्रस्ताव गरेका नौवटा क्षेत्रहरूमा व्यापार, लगानी, कृषि, पूर्वाधार विकास, विज्ञान तथा प्रविधि, क्षमता अभिवृद्धि, पर्यटन, सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयन र सांस्कृतिक आदान-प्रदान छन्। केरुङ नाका खुलेसँगै चीनले तातोपानी खासा नाकाभन्दा यसलाई जोड दिनथालेको छ। खासा नाकाको तुलनामा भौगोलिक रूपमा केरुङ भरपर्दो र उपयुक्त छ। त्यसैगरी ल्हासाबाट सिगाच्छेसम्म पुगेको रेलमार्गलाई भविष्यमा केरुङ पुर्‍याउनु सहज भएकाले चीनले यसको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनथालेको हो। यो नाकाबाट नेपाल हुँदै भारत जोड्ने स्थलमार्ग पनि सबैभन्दा छोटो हुनाले दुई देश बीचको व्यापारमा नेपालले पुलको काम गर्छ। चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङले नेपाल भ्रमणका समयमा 'नेपाल चीन र भारत बीचको पुल हो' भन्नुमा चाहिँ केरुङ नाकाबाहेक अन्य आर्थिक एजेन्डाहरू पनि रहेको स्पष्ट छ।
चीनले पछिल्लो समय छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ र सुमधुर बनाउने नीति लिएको छ। छिमेकी दह्रो भएपछि मात्र आफू पनि दह्रो हुन सकिन्छ भन्ने नीतिलाई अँगालेर चीनले अफगानिस्तान तथा पाकिस्तानको द्वन्द्व समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको छ। वर्तमान चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीसँग पनि विभिन्न देशको द्वन्द्व समाधानको राम्रो अनुभव छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पीएचडी गरेका वाङ जापानी भाषामा स्नातक हुन्। सन् 1982 मा चीनको परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेर उनले 1989-94 सम्म जापानका लागि चिनियाँ दूतावासमा काम गरेका थिए। पछि 2004-07 मा त उनी जापानमा चिनियाँ राजदूत नै भए। त्यहाँबाट फर्किएर 2007 देखि उनी चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव र 2008-13 सम्म चिनियाँ राज्यपरिषदको ताइवान सम्बन्ध अफिसका निर्देशक थिए। चीन सरकारका कार्यकारी पदहरूमा राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीपछि शक्तिशाली मानिएको परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा उनी सन् 2013 मा नियुक्त भएका हुन्। परराष्ट्र सेवामा 32 वर्षको अनुभव समेटेका वाङ विशेषगरी जापान विज्ञका रूपमा चिनिन्छन्।
परराष्ट्रमन्त्री हुनासाथ वाङले मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रियामा चीनको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। इरानमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अगाडि सारेको निशस्त्रीकरण वार्ता र त्यसलाई सफलतामा पुर्‍याउन पनि उनको योगदानले कोशेढुङ्गाको काम गरेको छ। सन् 2013 डिसेम्बरमा इजरायल र प्यालेस्टाइनको भ्रमण गरी उनले भनेका थिए, 'युद्धले समस्याको समाधान गर्दैन। हिंसाले घृणामात्र बढाउँछ। शान्ति वार्ता सबैभन्दा उपयुक्त र एउटामात्र बाटो हो।' त्यसैगरी सन् 2014 जूनमा भएको चीन-अरब शिखर सम्मेलन पनि वाङको सफलता मापन गर्ने एउटा सिँढी हो।
परराष्ट्रमन्त्री वाङ काठमाडौं जानुलाई सन् 2015 मा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षको नेपाल भ्रमण गराउने पूर्वतयारीका रूपमा पनि चित्रण गरियो। 2015 नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हिरक जयन्ती (60 औं वाषिर्कोत्सव) भएको र लामो समयदेखि चिनियाँ कार्यकारी प्रमुखको भ्रमण नभएकाले पनि यो आशा गरिएको हो। राष्ट्रपति भएपछि सी जिनपिङले रूसबाट आफ्नो विदेश भ्रमण सुरु गरेका थिए। सन् 2014 को अन्तसम्म राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ 17 वटा विदेश भ्रमणमार्फत पाँच महादेशका 50 देशहरू पुगिसकेका छन्। नेपालको अर्को छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत तथा दक्षिण एसियाली मुलुक माल्दिभ्स र श्रीलंकाको भ्रमण गरिसकेका राष्ट्रपति सीले 2015 मा नेपाल भ्रमण गर्ने गहकिलो सम्भावना छ।
चीनले पञ्चशीलका सिद्धान्तमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको भारत र म्यान्मारले सन् 2014 मा हिरक जयन्ती मनाइसकेका छन्। 2015 नेपाल र चीनबीच पञ्चशीलका सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा स्थापित कूटनीतिक सम्बन्धको हिरक जयन्ती हो। यो अवसरमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षको भ्रमण हुने अथवा नहुने विषयचाहिँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाले निर्धारण गर्नेछ। नेपालमा छिट्टै नयाँ संविधान निर्माण होस् र शान्ति तथा स्थिरता कायम होस् भन्ने चाहना चीनले राख्दै आएको छ।
पञ्चशील सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा रहेको चिनियाँ विदेश नीतिलाई वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङ सत्तामा आएपछि नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाइएको छ। चीनले कुनै पनि देशसँगको सम्बन्धमा साझा हित र सहकार्यलाई जोड दिनथालेको छ। चीनको बाह्य सम्बन्ध राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा र सांस्कृतिक क्षेत्रमा केन्दि्रत छ। अहिले चीनले विभिन्न 67 देश र पाँचवटा क्षेत्रसहित 72 साझेदारसँग सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको छ।
चीनले नेपालको पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलविद्युत, सडक यातायात, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग र लगानी विस्तार गर्दै आएको छ। नेपालमा दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरता हुने हो भने अहिलेभन्दा पाँच गुणा बढी चिनियाँ लगानी भित्रिने आँकलन नेपालविज्ञ चिनियाँहरू गर्छन्। नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको शून्य भन्सार दरमा नेपालबाट चीन निर्यात गरिने सामग्रीको संख्या बढाइनु तथा दुई देश बीचको वाणिज्य कारोबार चिनियाँ युआनमै हुने सम्झौता हुनुले नेपाल-चीन आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको स्पष्ट छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सीले जुन देशको भ्रमण गरेका छन्, त्यो देशमा चिनियाँ लगानी तथा आर्थिक सम्बन्धलाई महत्त्व दिइएको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले विदेशी लगानी चीनमा भित्र्याउने र चिनियाँ लगानीलाई विदेशमा लानेबारे नीति नै पारित गरेको छ। नेपालमा बढ्दै गएको चिनियाँ लगानीले पनि चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षले सन् 2015 मा नेपाल भ्रमण गरेर चिनियाँ व्यवसायीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने जानकारहरूको भनाइ छ।
चिनियाँ राज्यपरिषद अन्तर्गत रहेको चिनियाँ 'थिङ्कट्यांक'हरूको संस्था चिनियाँ समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन संस्थाका एसिया तथा ओसियानिक विभागका निर्देशक प्राध्यापक हु सिसेङका अनुसार, कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 60 औँ वाषिर्कोत्सवका अवसरमा कुनै चिनियाँ नेताले नेपालको भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेपनि ती व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष नै हुने कुरामा यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। हालै काठमाडौं भ्रमण गरेर फर्केका प्रा. हु भन्छन्, 'नेपाली नेताहरूको इच्छा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षले भ्रमण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ, तर चिनियाँ नेताहरूले कुन कुरालाई महत्त्व दिन्छन्, त्यसमा निर्भर रहन्छ।'
माल्दिभ्स र फिजीजस्ता साना मुलुकको भ्रमण गरिसकेका चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष नेपाल पनि जानेमा चिनियाँ बुद्धिजीवीहरू आशावादी छन्। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गत रहेको चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय मैत्री सम्पर्क संघको एसियाली विभाग निर्देशक वु सानका अनुसार, सन् 2015 मा उच्च चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमणको सम्भावना छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई-दुईपटक नेपाल गइसकेकाले पनि चिनियाँ नेतालाई नेपाल भ्रमण गर्न दबाब परेको छ।
आफ्ना उच्च नेताको भ्रमणलाई चीनले पहिले प्राय: गोप्य राख्ने गर्छ। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन च्यापाओले गर्ने नेपाल भ्रमणको कार्यक्रम पहिल्यै खुलासा हुँदा भ्रमण स्थगित भएको थियो। अर्को प्रयासमा मात्र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। यस पटकको चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई पनि चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा घोषणा गरेन। चिनियाँ नेताको नेपाल भ्रमणलाई पहिल्यै घोषणा नगर्नुको मुख्य कारणचाहिँ नेपालमा तिब्बतीहरूको सम्भावित विरोध प्रदर्शन र चिनियाँ नेताको सुरक्षाको विषय प्रधान रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा भएका तिब्बती आत्मदाहका घटनाले पनि चीनलाई थप सशंकित बनाएको छ। तसर्थ चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षले सन् 2015 मा नेपाल भ्रमण गर्ने भए पनि त्यसलाई अहिले गोप्य नै राखिने कुरा स्पष्ट छ। आउँदो वर्ष उनी नेपाल जालान् वा नजालान्, त्यो समय र परिवेशले बताउनेछ। तर अहिले चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङले गरेको भ्रमणचाहिँ घनिभूत रूपमा सफल भएको चिनियाँहरूले स्वीकारेका छन्।
साभारः कान्तिपुर दैनिक। 2071 पुस 15 गते （डिसेम्बर 30）मंगलबार